MID Co.,Ltd | Engineering
09 776 900 900 | mid@mid.com.mm
- Electrical Power
- Local Employment
- Nan Taw Car Rental
- Heavy Equipment Management
- Customs Declaration & Clearance
- Quality in Construction
Home > Archive Category: Engineering
Category Archives: Engineering
31/07/2019 MIDBuilding, Engineering
မြစ်ကြီးနား နည်းပညာတက္ကသိုလ်မှ တင်ဒါခေါ်ယူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သော နည်းပညာတက္ကသိုလ် (မြစ်ကြီးနား)တွင် (၃)ထပ်စာသင်ဆောင် ( ၁၉၂’ x ၃၈’ x ၃၆’ ) RC ( ၁ ) လုံး ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကို မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ( M I D Co., Ltd. ) မှ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီး စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အညီဆာက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းဓါတ်ပုံမှတ်တမ်း…
31/01/2018 MIDBuilding, Electrical Power, Engineering, Fire Station
ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ဦးစီးဌာနနှင့် မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ M I D Co., Ltd. တို့သည် ၂၀၁၇ – ၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ဗန်းမော်မြို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနခရိုင်ရုံး ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
31/12/2017 MIDBuilding, Engineering, Hospital
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ် ကုသရေးဦးစီးဌာနမှ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ( M I D Co., Ltd. ) မှ ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံ( ၂ )ထပ် တိုးချဲ့လူနာဆောင် (၁၅ဝပေ x ၅၆ပေ) အာရ်စီအဆောက်အဦဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုတင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့ပြီး စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်အညီ တည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
BaMaw Site 50% Completed in 30-04-2017
30/04/2017 MIDBuilding, Engineering
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် ကချင်ပြည်နယ်ကုသရေးဦးစီးဌာန မှ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ ( M I D Co., Ltd. ) မှ ဗန်းမော်ပြည်သူ့ဆေးရုံ ( ၂ ) ထပ် တိုးချဲ့လူနာဆောင် ( ၁၅ဝပေ x ၅၆ပေ ) အာရ်စီ အဆောက်ဦဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တင်ဒါ အောင်မြင် ခဲ့ပြီး ယခုချိန်တွင် ၅၀% ပြီးစီးပြီးဖြစ်ပါသည်။
Moe Mount Fire Station 100% Complete in 30-3-2017
30/03/2017 MIDBuilding, Engineering, Fire Station
၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် M I D Co., Ltd မှ တင်ဒါအောင်မြင်သော မိုးမောက်မြို့နယ် မီးသတ်စခန်း (၆၅×၅၂×၂၆)ပေ အာရ်စီနှစ်ထပ် ဆောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
Kachin State, PhaKant Electrical Power Line Construction 100% Complete
28/03/2017 MIDElectrical Power, Engineering
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်မြို့နယ်အတွင်း ၁၁ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်း၊ ၀.၄ ကေဗွီ ဓာတ်အားလိုင်း တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်များ တပ်ဆင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ၂၈ရက်၊ မတ်လ၊ ၂၀၁ရခုနှစ် တွင် ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်မှုပြီးစီခဲ့သည်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်း ရန်ပုံငွေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ ( M I D Co., Ltd. ) မှ တင်ဒါအောင်မြင်သော Lot.28 နှင့် Lot.29 မိုးညှင်းခရိုင်၊ ဖားကန့်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးနိုင်ရေးဓါတ်အားလိုင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာ များတပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို စာချုပ်ပါလုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့်အညီ ဆောင်ရွက်လျက် ခဲ့ပါသည်။
Myitkyina Electrical Power Line Construction 100% Complete
21/06/2016 MIDElectrical Power, Engineering
မြစ်ကြီးနား မြို့နယ်အတွင်းရှိ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် ဓာတ်အားလိုင်း တိုးချဲ့ တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ထရန်စဖော်မာ တပ်ဆင်တည်ဆောက်ခြင်း လုပ်ငန်းများ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ
BaMaw Site 100% completed in 8-2-2016
08/02/2016 MIDElectrical Power, Engineering
ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍရေးနှစ် ငွေလုံးငွေရင်းရန်ပုံငွေဖြင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရေးလုပ်ငန်းမှ မြန်မာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကုမ္ပဏီ လီမိတက် ( M I D Co., Ltd. ) မှ တင်ဒါအောင်မြင်သော ဗန်းမော်မြို့နယ် ၊ ရွှေကြီးနားကွက်သစ် ၊ ခွန်သာ ၊ ရိုးကြီး ၊ ကန်တော်ရပ်ကွက်များနှင့် ကမ္ဘာနီ ၊ ကံကြီးကျေးရွာများတွင် ဓါတ်အားလိုင်းများတိုးချဲ့တည်ဆောက်ခြင်း
Construction isaMyanmar local engineering company approved by Myanmar government. The business scope of MID Group includes trading of construction materials, building design, construction, renovation and decoration services. By the utilization of resources from Singapore, China and Myanmar, MID provides the most professional engineering and construction materials trading services to customers with the operation principals of high efficiency, reliability and environment friendly technologies.
Total visitors : 2,567
All Rights Reserved © MID Co.,Ltd. | Web Design By Skysoft Co.,Ltd.